Amboary ny lesoka momba ny mpampiasa sy ny teny miafina ao amin'ny iCloud | Vaovao IPhone
Alexander Cabrera | | iCloud, Fampianarana sy torolàlana
Bibikely taloha ity, saingy iray izay hitanay hatrany, na dia taorian'ny fanavaozana farany ny iOS 9. Indraindray aza niditra an-tsokosoko ny iPhone iray izay anontaniany tsy tapaka ny data-nao Fidirana iCloud, mpampiasa sy teny miafina. Na dia mampiditra ny Apple ID sy ny tenimiafinao aza ianao, ny lesoka dia mahatonga ny solonanarana sy ny tenimiafinao hangataka hatrany (ary hatrany hatrany hatrany), manelingelina tokoa, sa tsy izany?
Mety hiteraka fahasosorana izaitsizy ny fananana iPhone mihitsoka ao anaty fantsona fampidirana iCloud. Soa ihany, efa akaiky ny fanampiana. Ao amin'ity lahatsoratra ity manana vahaolana dimy hafa izahay ho an'ny loop fampidirana iCloud.
1 Slide hamadika
3 Hamarino fa miasa ny iCloud
4 Avereno resahina ny teny miafinao
5 Kitiho ary avereno amin'ny laoniny ny iPhone
Ny lesoka amin'ny fidirana amin'ny alalàn'ny iCloud dia mety vokatry ny a fifandraisana Wi-Fi diso , ary ny fomba tsotra indrindra hanamboarana azy dia vonoy ny iPhone ary rehefa afaka kelikely dia avereno indray. Minitra vitsy monja izany, ary raha raikitra ny olana dia hamonjy anao amina taonina ny vahaolana hafa amin'ny olana azonao andramana. Araho ireto dingana ireto mba hamonoana ny iPhone ary hamerenana azy io:
Tano mafy ny bokotra manidy / mifoha (eo an-tampon'ny iPhone, na eo amin'ny ilany ankavanana raha maodely maoderina kokoa izy) mandritra ny dimy segondra mandra-pahatongan'ny safidy hamonoana.
Swipe the Power off icon Miankavanana.
Andraso mandritra ny 30 segaondra ho lasa mainty tanteraka ny écran.
Tsindrio ny bokotra Lock / Wake hampiverenana ny telefaona.
Rehefa efa mandeha izy io, dia haka fotoana kely vao manomboka ny iCloud. Ny ID Apple sy ny teny miafinao dia azo angatahina, rehefa tafiditra izy ireo dia tsy tokony hangataka azy ireo intsony.
Raha tsy mamaha ny olana ny famerenana ny iPhone dia manandrama fivoahana iCloud ary avy eo miditra indray. Araho ireto dingana ireto:
Mandehana any Fikirana> iCloud.
Mikorisa ambany ary paompy hiala.
Mandrosoa eo Esory amin'ny iPhone.
Tsindrio izao Midira.
Ampidiro ny Apple ID sy ny teny miafinao.
Ity famerenana iCloud ity dia afaka manamboatra ny olana apetraka.
Hamarino fa miasa ny iCloud
Alohan'ny hanohizanao dia manoro anao izahay hanamarina izany iCloud mandeha tsara.
Tsy maintsy mankany ianao https://www.apple.com/support/systemstatus/ amin'ny Mac na iPhone anao ary zahao izany rehetra izany maitso ny serivisy. Raha misy olana amin'ny iCloud amin'ny mpizara Apple dia tsara kokoa ny miandry an'i Apple hanamboatra azy ao anatin'ny roa ora.
Avereno resahina ny teny miafinao
Raha tsy nisy nahomby ireo dingana etsy ambony ireo, ary ny Apple System Status dia efa voamarina mba hiasa tsara, dia ny dingana manaraka dia ovao ny teny miafinao Apple ID. Manahirana izany, fa ny olana matetika dia raikitra. Ny fanovana ny teny miafina dia mora tantana avy amin'ny Mac (na Windows PC).
Sokafy ny tranokala Safari ary mankanesa any https://appleid.apple.com
Tsindrio Hanova tenimiafina.
Ampidiro ny Apple ID anao ary tsindrio Next.
Safidio ny fanamarinana mailaka na valiny fanontaniana fiarovana ary tsindrio Manaraka.
Tsindrio Fidio ny tenimiafina.
Ampidiro a tenimiafina vaovao ao amin'ny sehatry ny teny miafina ary avy eo manamafy ny teny miafina.
ankehitriny ampidiro amin'ny iPhone ny teny miafina rehefa anontaniana. Tokony eken'ny iPhone izy io ary hamaha ny olana.
Kitiho ary avereno amin'ny laoniny ny iPhone
Raha mangataka ny tenimiafinao iCloud foana ny iPhone dia efa nanandrana namono ny iPhone ianao, nanova ny teny miafinao iCloud sy ireo safidy hafa nolazainay etsy ambony, dia ny dingana farany dia backup ary avereno amin'ny laoniny ny iPhone.
Mila manao a ianao avereno amin'ny solosainao ny iPhone-nao satria tsy ho afaka hamerina amin'ny iCloud izany.
Ampifandraiso amin'ny Mac ny iPhone-nao mampiasa ny tariby USB.
Kitiho ireo fitaovana ary safidio ny iPhone.
Safidio ny famintinana.
Safidio ho an'ny tanteraho amin'ny solosaina ny backup.
Tsindrio miverina ankehitriny.
Andraso ny fizotran'ny backup ary ho hitanao ny bara fandrosoana manga eo an-tampon'ny iTunes).
Rehefa vita dia azonao atao ny manomboka ny fizotran'ny iPhone amin'ny laoniny:
Ataovy mifandray amin'ny Mac ny iPhone-nao.
Tsindrio Fikirana> iPhone> iCloud.
Tsindrio ny Find my iPhone.
Vonoy ny Find my iPhonee.
Ampidiro ny tenimiafinao Apple ID ary kitiho ny Deactivate.
Miverina amin'ny iTunes amin'ny Mac anao, kitiho Avereno ny iPhone.
Araho ny fizotran'ny famerenana amin'ny laoniny ary ampiasao ny Backup izay noforoninao talohan'ny fizotry ny famerenana amin'ny laoniny. Mandehana misintona ny tsimbadika farany an'ny iOS avy amin'ny Apple, ary avereno amin'ny laoniny ny iPhone.
Miaraka amin'ny iray amin'ireto dingana ireto dia tokony ho voavahinao ny olana izay angatahina tsy tapaka ao amin'ny fitaovanao ny Apple ID sy ny teny miafinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Ahoana no manamboatra iPhone izay mangataka hatrany ny anaranao iCloud sy ny teny miafinao
David C ++ dia hoy izy:
Salama, izao fotsiny no nanjo ahy: O, nanova ny teny miafiko aho ary namerina namerina ny fitaovako rehetra, saingy mbola hita ao amin'ny pro iPhone 6, iPad Air ary Macbook ahy izany. Mbola tsy raikitra.
Valio i David C ++
Alexander Cabrera dia hoy izy:
Salama David, Ianao ve nanao ny vahaolana mety 5?.
Adry_059 dia hoy izy:
Mitranga amiko miaraka amin'ny IPOD GENERATION fahadimy, hiezaka miaraka amin'ny dingana hanakatonana ny fotoam-pivoriana hizaha raha toa ka tsy mizaka ny olana.
Mamaly an'i Adry_059
Elmer dia hoy izy:
Ami sendra ahy tamin'ny AppStore aho tsy afaka misintona na manavao na inona na inona tsy fantatro izay hatao dia tsy tiako ho very ny fonja.
Valiny tamin'i Elmer
Salama, nanao ny dingana rehetra aho ary mbola manana olana mitovy amin'izany ihany koa, manana fitaovana hafa ao amin'ilay kaonty iray ihany aho ary mandeha tsara izany, miditra amin'ny pc aho ary mamela ahy hiditra ny kaonty icloud ary tsy afaka mieritreritra zavatra hafa aho, misy mahalala vahaolana
Tsy nisy nety tamiko ny fomba rehetra. Finday vaovao io ary tsy avelany hanao backup aho satria tsy voalamina (rehefa efa naveriko tamin'ity iray ity ny iPhone teo aloha). Manome ahy ny hafatra fandraisana izany, manokatra azy aho ary mandeha mahitsy amin'ny efijery Apple ID, izay manome ahy ny olana.
Amin'izao fotoana izao dia manenina tanteraka aho tamin'ny andro nahazoako ny iPhone-ko voalohany
Na dia tsy mifandray amin'ny tamba-jotra aza izany dia mangataka ahy foana izy hifandray amin'ny iCloud. Tsy afaka mamaky pejy mangina akory aho.
Japan Display dia miomana hanao fampisehoana AMOLED ho an'ny iPhone amin'ny taona 2018
Nilaza ny mpandalina ny antoko fahatelo ao Apple fa tsy manampy ny orinasa ny iPhone kely kokoa